Plastic Snow sahiratsy amin'ny Wear Strip - China Richina
Modely No .: H320
Amin'ny ankapobeny Length: 1200mm
oram-panala fanesorana ankapobeny lavany 1200mm
Snow lapelina lohany haben'ny 320-400mm, PP ara-nofo amin'ny manamafy fibs vary.
Snow angady amin'ny Powder vy mifono Tube tahony amin'ny sombin-javatra mafy
Aina D-endrika grip
Snow sahiratsy Blade sy mitana mifandray amin'ny visy.
Aluminium maharitra manapaka sisin'ny hampitombo hery sy fitaovana ny fiainana
(Safidy dia mamela aluminium / hazo / firberglass tahony)
Mitady tsara Poly Snow Tools Manufacturer & mpamatsy? Manana fantina malalaka amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hahazo famoronana. Ny tsara indrindra dia tsara Snow sahiratsy azo antoka. Origin China izahay Factory ny Snow Scoop lapelina . Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay.
Steel tahony Poly Snow Scoop
Aluminum Snow Pusher amin'ny Wheels
Heavy Adidy Snow sahiratsy amin'ny Wheels
Sisin-dalana Ice Scraper amin'ny Wood tahony
Kids Plastic Snow sahiratsy amin'ny tahony vy
Snow Pusher amin'ny Wheels